Google Inoita Veruzhinji Domain Mifananidzo Kutaridzika Senge Stock Photography, Uye Ndiro Dambudziko | Martech Zone
Muna 2007, ane mukurumbira wemifananidzo Carol M. Highsmith akapa yake yese yehupenyu kudura Raibhurari yeCongress. Makore gare gare, Highsmith akaziva kuti kambani yekutora mifananidzo stock Getty Mifananidzo yanga ichibhadharisa marezinesi ekushandisa aya mapikicha eruzhinji, pasina mvumo yake. Uye saka akaendesa nyaya kumatare emadhora bhiriyoni, vachitsvaga kutyorwa kwekodzero uye vachipomera kushandisa zvisirizvo uye nekunyepedzera mifananidzo ingangoita 19,000. Matare haana kutsigira naye, asi yaive nyaya yepamusoro.
Mhosva yeHighsmith inyaya yekunyevera, ichienzanisira njodzi kana matambudziko anomuka kumabhizimusi apo mifananidzo yeruzhinji inobatwa senge stock photography. Mitemo yakatenderedza kushandiswa kwemifananidzo inogona kuomarara uye yakaitwa kutonyanya kuomarara nemaapps akafanana Instagram izvo zvinoita kuti zvive nyore kune chero munhu kutora uye kugovana mafoto. Muna 2017, vanhu vachatora kumusoro kwemamiriyoni mapfumbamwe emamiriyoni emifananidzo Iyo nhamba inoshamisa.
Kubudirira kwekushambadzira munyika yanhasi kunogona kungoenderana nekuti chimbo chinonyatsoshandisa mifananidzo kukudziridza kuzivikanwa uye mukurumbira, kuwedzera kuziva, kubata pfungwa, uye kusimudzira zvirimo. Chokwadi - icho chakanyorwa nzira inoenda kumoyo wemireniyamu—Ikiyi. Vatengi havapindure kumifananidzo inotaridzika kunge yakadzikiswa kana yakarongedzwa. Mhando dzinofanira kusanganisa chokwadi mifananidzo pane yavo webhusaiti, vezvenhau uye zvekushambadzira zvinhu, ndosaka ivo vari kuwedzera kutendeukira kune chaiko stock kutora mafoto nzvimbo senge Dreamstime uye yeruzhinji domain mifananidzo. Asati ashandisa chero mufananidzo, zvisinei, mabhizinesi anofanirwa kuita homuweki yavo.
Kunzwisisa Veruzhinji Domain Mifananidzo
Veruzhinji dura mifananidzo vakasununguka kubva kune copyright, kungave nekuti vakapera kana kusatombovapo pakutanga - kana muzviitiko zvakakosha apo muridzi wekopiraiti akapa nemoyo wese kodzero dzekopirita. Nzvimbo yeruzhinji ine hupfumi hwemifananidzo pane dzakasiyana misoro, inomiririra sosi yakakosha. Iyi mifananidzo yakasununguka kushandisa, nyore kuwana, uye inochinjika, zvichigonesa vashambadziri kuti vakurumidze kuteedzera chaiyo mifananidzo inoenderana nezvavanoda. Nekudaro, nekuda kwekuti kuruzhinji mifananidzo yemahara yakasununguka kubva kune copyright hazvireve kuti vashambadzi vanogona kumbomira maitiro ekuvhenesa, ayo anogona kunonoka, uye nekudaro, anodhura. Nei uchigona kurodha pasi yemahara chifananidzo kana iwe uchinge warasikirwa nemazuva kuti ubvise icho, kana zvakanyanya, kurasikirwa nemamirioni emadhora mudare?
Veruzhinji dura mifananidzo uye stock kutora mifananidzo hazvisi izvo zvakafanana zvinhu, uye yeruzhinji domain mifananidzo inofanira kushandiswa nehungwaru. Yese kambani inoshandisa yeruzhinji mifananidzo mifananidzo inoda kunzwisisa njodzi dzinobatanidzwa.
Chimwe chikonzero nei stock stock uye yeruzhinji domain mifananidzo inowanzoonekwa seinogona kuchinjika ndeyekuti makambani akaita seGoogle akaedza kuita kuti aite senge iwo. Vatengi vanowanzo tenderera kune yeruzhinji domain mifananidzo nekuti Google inovaisa pamberi pemastock mapikicha nekukanganisa organic mhinduro. Uku kunyongana kunogona kupinza mabhizinesi mumatambudziko. Kana mumwe munhu achitsvaga mifananidzo yemastock, havafanirwe kuona mhedzisiro yemifananidzo yeruzhinji, sezvakaita mifananidzo yemastock isingaratidzi kana mumwe munhu achitsvaga mifananidzo munzvimbo yeruzhinji.
Nei Google ichiita izvi? Pane akati wandei tsananguro dzinogona kuitika. Imwe ndeyekuti Matt Cutts, uyo aive mukuru weanti-spam, akasiya Google mu2016. Isu tinoona yakawanda spam muSERP nguva pfupi yapfuura, kusanganisira paGoogle's own blog muzvinyorwa nezve maitiro akanakisa. Mishumo inoramba isina kutaurwa. Chimwe ndechekuti iyo AI inodzora algorithm izvozvi uye haina kungofanana neyaizotarisira kubva kuGoogle. Zvakafanana nenzira mashandiro enhau enhema anoshanda, inoguma inosimudzira mhando isina kukodzera yezvinyorwa. Zvakare, kupokana uku kunogona kunge kuri kutsiva kwemasangano emabhizimusi emifananidzo akamhan'arira Google nekuda kweGoogle Mifananidzo kurwisa kukwikwidza zano kana kunyangwe kuiswa zvisina tsarukano, sezvo Google ichiita traffic yakawanda kubva kuGoogle Mifananidzo; (inofungidzirwa kuti 85% yemifananidzo yakadhindwa pawebhu inoparadzirwa neGoogle Mifananidzo). Traffic inodzoka muGoogle Mifananidzo ichaunza kushambadzira mari.
Icho chokwadi ndechekuti yeruzhinji domain mifananidzo haina chekuchengetedza maficha echitoko foto. Kungoita kuti chifananidzo chiri munharaunda yeruzhinji hazvireve kuti chakasununguka kubva panjodzi yekutyorwa kwekopiraiti, kana kutyorwa kweimwe kodzero, senge kodzero dzevanhu vanoonekwa mumufananidzo. Muchiitiko chaHighsmith, nyaya yacho yaive yekushaikwa kwekutarisisa kubva kumutori wemifananidzo achitora rezinesi rakasununguka, asi kushomeka kwemvumo kubva kumuenzaniso kunogona kuve kwakaomarara.
Pakutanga gore rino, Leah Caldwell akamhan'arira Chipotle nemari inodarika mabhiriyoni maviri emadhora nekuti akataura kuti kambani yakashandisa mufananidzo wake mune zvekushambadzira zvinhu pasina mvumo yake. Muna 2006, mutori wemifananidzo akakumbira kutora mufananidzo waCaldwell kuChipotle padhuze neUniversity yeDenver, asi akaramba uye akaramba kusaina fomu rekuburitsa rekushandisa iyo mifananidzo. Makore masere gare gare, Caldwell akaona mifananidzo yake pamadziro munzvimbo dzeChipotle muFlorida neCalifornia. Mifananidzo yacho yaive nemabhodhoro patafura, iyo Caldwell akati yakawedzerwa mukati uye yakasvibisa hunhu hwake. Akapomera.
Nyaya dzeCaldwell neHighsmith dzinovhenekera kuti zvingave nenjodzi zvakadii kumakambani kushandisa zvifananidzo zvisina kuongororwa zvakakwana. Veruzhinji domain mifananidzo inopihwa ine shoma warandi uye ivo havana modhi-yakaburitswa kana chivakwa chakaburitswa. Iye mutori wemifananidzo, kwete modhi, anopa chete kodzero idzo muridzi wemifananidzo, zvinoreva kuti modhi anogona kuramba achimhan'arira mugadziri kana mufananidzo uchishandiswa kutengeserana. Kubhejera kukuru.
Hapana chimwe cheizvi kutaura kuti mabhizinesi haafanire kutora mukana wevoruzhinji mifananidzo, asi zvirinani kusimbisa kukosha kwekunzwisisa njodzi. Veruzhinji dura mifananidzo inofanira kungoshandiswa mushure mekuitisa nekushingairira kudzikisa njodzi. Ichi chikonzero nei Dreamstime inosanganisira diki kuunganidzwa kwemazita eruzhinji mifananidzo pane yayo webhusaiti uye muhombe kwazvo muunganidzwa wemahara emhando-yakaburitswa mifananidzo, ayo mapipi waranti anopiwa.
Kunzwisisa njodzi yezviratidzo zveveruzhinji idanho rekutanga. Nhanho yechipiri yezvigadzirwa ndeyekumisikidza iyo yekushingairira maitiro. Kudzokorora mibvunzo kunofanirwa kusanganisira: Wakave mufananidzo uyu wakanyatso kuiswa nemunyori, uye kwete "kubiwa"? Iyo saiti yemufananidzo inowanikwa kune wese munhu? Mifananidzo yacho yakaongororwa here? Ndezvipi zvinokurudzira izvo vafotori vanofanirwa kupa hukuru hwemifananidzo muunganidzwa pasina muripo? Zvakare, nei mifananidzo yakadzvanywa zvakangoerekana yaitika? Mufananidzo wega wega une mashoma mazwi, uye anowanzove asina basa.
Vatengesi vanofanirwa kufunga nezvemuenzaniso zvakare. Iye munhu ari mumufananidzo akasaina modhi yakaburitswa? Pasina imwe, chero kushandiswa kwekutengeserana kunogona kupikiswa sezvakaitwa naCaldwell naChipotle. Kukuvadza kunogona kuve makumi emamirioni emadhora emufananidzo mumwe chete, kunyangwe kana modhi ikabhadharwa. Kumwe kufunga kuri kukanganisa kutyora chiratidzo. Zviripachena kuti, logo iri pamiganhu, asi ndizvo zvakaita chifananidzo senge siginecha yaAdidas-mitsetse mitatu pachidimbu chewadhiropu.
Veruzhinji dura mifananidzo inogona kuve yakakosha sosi, asi inouya nenjodzi huru. Sarudzo yehungwaru ndeyekushandisa mapikicha emastock uye kuve nehunyanzvi kuitira kuti ugare kure necliches. Mhando dzinogona kuwana rugare rwepfungwa nekuti ivo vanoziva kuti mifananidzo dzakachengeteka kushandisa, zvakare vachiwana izvo zvirimo zvemukati zvavanoda kuti zvigadzirwa zvekushambadzira zviwedzere kusimba. Zvirinani kuisa mukuyedza kuongorora mifananidzo kumberi, pane kubata nedare gare gare.
Tags: chaiwo stock mifananidzoCarol M. HighsmithChipotleCopyrightcopyright kutyorwakurotamanyepoGetty Imagesgoogle chifananidzo chekutsvagaGoogle +kushandiswa zvisina kufanira kwakakombamufananidzoInstagrammhosvaleah caldwellmatt cuttspublic domainyeruzhinji domain mufananidzostock kutora mifananidzomifananidzo yemasheya
Ane makore anodarika makumi maviri ane ruzivo mukugadzirwa uye midhiya mitsva, Serban aratidza kuve hunyanzvi hwekutungamira, achibudirira kusanganisa kugona uye kugona kugona. Akabatanidza Archiweb muna20, mutungamiri anohwina mubairo pakati pemakambani ekugadzira webhu muSE Europe, uye akafungidzira ramangwana-kuva-stock agency mukutanga kwa1998. SeCreative Director weArchiweb akabatsira makambani mazhinji kutanga kana kugadzirisa kuvapo kwavo kwepamhepo. Serban anobata zano rekuvandudza bhizinesi Dreamstime, uye iri kubatikana zvakanyanya mukuita kwemazuva ese kwenzvimbo yewebhusaiti. Iye muoni ane hunyanzvi uyo anotenda mukukanganisa tsika dzebhizinesi kuti aongorore sarudzo itsva. Akatanga kurota hope neyechinyakare, ikozvino yechinyakare kamera kamera uye yake yekuunganidza mifananidzo. Akaenderera mberi nechiroto chake uye zvino Dreamstime, kunze kwekuve mumiriri uye bhizinesi, ndiyo inzvimbo huru yekuungana yevanofarira vatori vemifananidzo nevagadziri.